Ahoana ny fifandraisan'ny mpivarotra antsinjarany amin'ny finday? | Martech Zone
Talata, Jolay 19, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Fahazoan-dàlana avy amin'ny olona tsara at eDigitalResearch ary PortalTech, mpamatsy raharaham-barotra lehibe any Angletera, nampita ny Whitepaper farany teo izy ireo momba ny fiantraikan'ny finday amin'ny varotra antsinjarany Marketing Infographic. Raha hijery ny haben'ny infographic dia tsindrio fotsiny eo.
Raha te hampiasa ny Infographic amin'ny tranokalanao ianao dia tsy maintsy mampiasa ity kaody manaraka ity:
Sintomy ny fironana manova ny safidinao amin'ny fizarana sy fividianana multichannel . Marketing Infographic nataon'iDK New Media
Mahaliana ny statistika. Nomena ny vaovao tian'ny mpivarotra Mihidy ny sisintany ary Mihena ny Best Buy ny dian-tongony fivarotana, tsy azoko antoka raha vaovao tsara na ratsy ity. Toa tsy dia lafo loatra ny mpivarotra ambongadiny, toa miteraka fifamoivoizana ary tsy mahomby angovo.
Raha afaka mampiasa smartphone amin'ny fomba mahomby amin'ny fikarohana ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana isika - ary mitsidika fotsiny raha te-handray ny fividianana - tsy tsara ho an'ny rehetra ve izany? Tsy azoko antoka fa misy asa very noho ny fizarana sy fandefasana trano fitehirizana bebe kokoa (izay tsy manampy ny tsy fahampian'ny angovo, heveriko angamba).